ANTIBIOTIC | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / ANTIBIOTIC
MYMC Playlist: Rock နှင့်တစ်ဖန်ကွဲခြင်း
ဒီ Playlist ကတော့ အသဲကွဲသမားတွေအတွက် Rock ဆန်ဆန် အကွဲသီချင်းလေးတွေပါ။ ၁။ မင်းကြောင့်လား – အငဲ ၂။ ငိုနေရတဲ့မျက်ရည် – Antibiotic ၃။ အိပ်မက်ထဲကကမ္ဘာ – အောင်လ ၄။ ဆွေးမြည့်အသည်း – Cobra ၅။ ရင်တွင်းစကား – ထွဏ်းထွဏ်း ၆။ မထိုက်တဲ့အလင်း – Idiots ၇။ အဝေးကချစ်သူ – လေးဖြူ ၈။ ခွဲခွာချိန် – လေးဖြူ ၉။ မနေတတ်ဘူး – မဒီ ၁၀။ အထီးကျန် – မိုးမိုး ၁၁။ မျှော်လင့်ချက်ပဲ – မျိုးကြီး ၁၂။ ဝေး – မျိုးကြီး … Continue Reading →
May 30, 2011 amedeo ဖိုးကာ အငဲ ထွဏ်းထွဏ်း ရင်ဂို ဖြူဖြူကျော်သိန်း အောင်လ ဇော်ဝင်းထွဋ် လေးဖြူ ၀ိုင်ဝိုင်း မိုးမိုး မဒီ မျိုးကြီး ANTIBIOTIC Cobra Idiots Media Rဇာနည် Reason 1 Comment
ထာဝစဉ် 2005 Rock And Rap Live Show (2)
၁. Spy.M – အပြောမကြီးနဲ့ ၂. Example – မင်းကြောင့်ပေါ့ ၃. ယုဇန – သီတင်းကျွတ်ညလေးတစ်ည ၄. ANTIBIOTIC – ဂြိုလ်သားလူလား ၅. System, Cobra – ချစ်နေဆဲ ၆. Too Big – ထာဝစဉ် ၇. မိုးမိုး – ဥပေက္ခာ ၈. သဇင် – သူ့ရည်းစားဖြစ်နေတယ် ၉. အီတိုး – မင်းအတွက် ၁၀. ဟဲလေး – ကြင်ရာဖက်
May 30, 2009 Mad Computerist အီတိုး အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ယုဇန မိုးမိုး ဟဲလေး သဇင် ANTIBIOTIC Cobra Example Myanmar Artist System Too Big2Comments
Antibiotic – မျက်နှာ
၀၁။ ကျေးဇူးကန်းသူ ၀၂။ ၂၇လမ်းကပြဿနာ ၀၃။ အေးဆေးဘဲ ၀၄။ မျက်နှာ ၀၅။ မူကြိုတက်ပါ ၀၆။ ငိုနေရတဲ့မျက်ရည် ၀၇။ ဂြိုလ်သားလူသား ၀၈။ အာကသပြတိုက် ၀၉။ ဒို့ချစ်တယ် ၁၀။ ခေတ်နောက်ကျသူ ၁၁။ လူငယ် ၁၂။ ပလပ်စတစ်လူသား ၁၃။ ဂရုမစိုက် Song Titles provided by ME (MMA)
November 28, 2008 Mad Computerist အဆိုတော် (အဖွဲ့) အခွေ (တကိုယ်တော်) ANTIBIOTIC Myanmar Artist 10 Comments
အလွမ်းရဲ့ည – Vol:1
၀၁။ မျှော်လင့်နေမယ် – R ဇာနည် ၀၂။ နင့်အကြောင်း – ခင်ဖုန်း ၀၃။ အလွမ်းရဲ့ည – L လွန်းဝါ ၀၄။ တူညီတဲ့အချစ် – ရှင်ဘုဏ်း ၀၅။ ကြုံတွေ့ဘူးသလား – Big Bag ၀၆။ ရေစက် – မောင်မောင်ဇော်လတ် ၀၇။ ငါတော့မှားပြီး – ရေဗက္ကဝင်း ၀၈။ နေကြာစေ့ – Antibiotic ၀၉။ ပြန်လာခဲ့ – L ဆိုင်းဇီ ၁၀။ ပလပ်ဖောင်း မင်းသား – မောင်မောင်ဇော်လတ်
August 29, 2008 ME *MMA* အခွေ (အများ) ရှင်ဖုန်း ရေဗက္က၀င်း မောင်မောင်ဇော်လတ် ခင်ဘုဏ်း ANTIBIOTIC Big Bag Lဆိုင်းဇီ Myanmar Artist Rဇာနည်3Comments
၁။ CHIYO (Instrumental) – Mee-T ၂။ မိုး – မေသူဟံ ၃။ ပြောပါပြောပါ – 528 ၄။ လူရောင်လွင့်တဲ့သူ – NC 13 ၅။ အဆင်ပြေချိန် – Scarecrpws ၆။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် – Idiots ၇။ လူ့ဘ၀ – Monopoly ၈။ အိမ်မက်မဆုံးခင် – Noise Camp ၉။ ဟေ့ဟေ့ဘေဘီ – Antibiotic ၁၀။ မီးတောက်လေး – Crow ၁၁။ ငါအသုံးမကျဘူး – The Ants ၁၂။ အဝေးကမေမေ – NC 13 ၁၃။ ဒါပေမဲ့ … Continue Reading →
August 6, 2008 mmsong အခွေ (အများ) ANTIBIOTIC Idiots Monopoly NC-13 New Myanmar Albums The Ants 19 Comments
Antibiotic – Unreleased Album Part 2
၁။ ပလပ်စတစ်လူသား ၂။ ငိုနေရတဲ့မျက်ရည် ၃။ အရူးအမှူး ၄။ အရူး ၅။ အာကာသဗျာဒိတ် ၆။ အဆိပ်ပေးပါ ၇။ ရာသီဥတုနဲ့အချစ် ၉။ ငအ
August 2, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ANTIBIOTIC Unreleased Albums2Comments
Antibiotic – Unreleased Album Part 1
၁။ ဂြိုလ်သားလူသား ၂။ လူသားဂြိုလ်သား ၃။ပြိုင်ပွဲ ၄။ (ခွေးမြှီးကောက်ခြေထောက်စွပ်) ၅။ ဆိုဒ်ဆင်း ၆။ မာနတ် ၇။ ၂၇လမ်းကပြဿနာ ၈။ တို့ချစ်တဲ့ ၉။ ထမင်းမစား ၁၀။ နင်ဒုက္ခရမယ်
August 2, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ANTIBIOTIC Unreleased Albums Leaveacomment
၁။ မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့ – The Antz ၂။ သနပ်ခါး – Black Hole ၃။ အမြဲတမ်း – The Antz ၄။ သီချင်းအတု – Antibiotic ၅။ အချစ်+အချစ် – Black Hole ၆။ အားလုံးဖြတ်ပစ်မယ် – Big Bag ရ။ မမြင်နိုင်တော့ဘူး – Black Hole ၈။ မာနမျက်ရည် – Antibiotic ၉။ နေသာသလိုနေလိုက် – Black Hole ၁၀။ ငရဲသို့ – Big Bag ၁၁။ နင်တကယ်ချစ်ရင် – Antibiotic
January 21, 2008 mmsong အခွေ (အများ) ANTIBIOTIC Big Bag Black Hole The Ants 10 Comments
၁။ တော်ပါပြီသွား – အဲလက်စ် ၂။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း – Big Bag ၃။ သတိမရဘူး – ဆောင်းဦးလှိုင် စည်သူလွင် အဲလက်စ် ၄။ နားအေးချင်တယ် – ဆုန်သင်းပါရ် ၅။ မင်းရက်စက်တယ် – အယ်နောင်း ၆။ ဒိုင်ယာရီ – စည်သူလွင် ၇။ ငါဘယ်သူ့ပြောရမလဲ – ရွှေထိုက် ၈။ နောက်ဆုံး – The Ants အယ်ဖြူ ၉။ အိမ်မက်လေး – မီးမီးခဲ ၁၀။ တစ်ခါကချစ်သူတွေ – ဆောင်းဦးလှိုင် ၁၁။ အာကာသပြတိုက် – ANTIBIOTIC ၁၂။ ငွေ- ခင်ဘုဏ်း ၁၃။ မရှိသေးဘူး – … Continue Reading →
January 18, 2008 mmsong အခွေ (အများ) အဲလက်စ် အယ်ဖြူ အယ်နောင်း စည်သူလွင် ဒိုးလုံး ဆုန်သင်းပါရ် ရွှေထိုက် ဆောင်းဦးလှိုင် ခင်ဘုဏ်း မီးမီးခဲ ANTIBIOTIC Big Bag The Ants Valentine Albums 1 Comment